Sunday March 10, 2019 - 12:27:46 in Wararka by Super Admin
Garoonka diyaaradaha magaalada Muqdisho waxaa shalay ka furmay kulan ay soo qaban qaabisay dowladda Xabashida Itoobiya kaas oo ay ka qeyb galeen inta badan madaxda Warbaahinta ee ka jira Koonfurta iyo bartamaha dalka Soomaaliya.
Kulanka oo ay soo qaban qaabisay dowladda Itoobiya ayaa lagu kala qaadanayay ajandayaal cusub oo dhanka warbaahinta ah iyo sidii Itoobiya ugu adeegan laheyd qalabka warbaahinta qeybihiisa kala duwan.
Mas'uuliyiin ka socday saafaaradda Itoobiya ee Muqdisho iyo kuwa kale oo ka yimid dhanka magaalada Addis Ababa ayaa shiriyay agaasimayaasha Idaacadaha iyo Telefeshinnada ka howlgala magaalada caasimadda ah ee Muqdisho.
Shirkan oo qeyb ka ah damaca Itoobiya ay ku doonayso in ay ku gummeysato shacabka Soomaaliyeed waxaa kasoo baxay dhowr qodob oo dhammaantood lagu amray in aan idaacadaha iyo Telefeshinada laga baahin balse ay noqdaan qodobo shaqo oo dhinacyadu ku heshiiyeen.
Saraakiisha Itoobiyaanka ee kulanka hoggaaminayay ayaa u sheegay agaasimayaasha Idaacadaha iyo Telefeshinnada in looga baahanyahay wax ka bedelidda habka ay hadda u shaqeeyaan ayna shacabka Soomaalida ka dhaadhiciyaan in wax colaad ah aysan ka dhaxayn Itoobiya iyo Soomaaliya.
Wariyaal ka howlgala Idaacadaha iyo Telefeshinka magaalada Muqdisho oo madaxdoodu kulanka ka qeyb galeen ayaa baraha bulshada ku faafiyay qaar kamid ah qodobadii laga wada hadlay waxayna ku sheegeen sidan:-
1). in Itoobiya uu ka dhacay isbadal ku saleysan nabad iyo wada-nolaasho gobalka ah lana soo afjaro wax kasta oo dagaal ama cadowtinimo ah oo kala dhaxeeyay wadamada deriska ah.
2) In Soomaaliya iyo Itoobiya aysan kala maarmin ayna hogaamiyaasha labadal ku heshiiyeen is dhaxgal dadweyne, horumarin Ganacsi, iyo in laga wada shaqeeyo Nabadda geeska iyo tan labada dal.
3) In umadda Itoobiya iyo tan Soomaaliya qalbiyadooda laga tir tiro waxyaabihii xumaan iyo colaad ah ee soo maray labada dal.
4) In Warbaahinta Soomaalida ay ka qayb qaadato dhismaha waddo shacabka labada dal u xaari karta is jecel iyo kuwa noolaasha darisnimo iyo Iskaashi.
Intaas kadib ayay shabakadda SomaliMeMo waxay khadka taleefanka kula xiriirtay mid kamida wariyaasha caanka ah ee magaalada Muqdisho oo warbaahinta uu ka shaqeeyo kulanka lagu marti qaaday, wuxuu sheegay in dowladda Itoobiya ay qarash kumanaan kun dollar ah uballan qaadday Idaacadaha iyo Telefeshinnada qarashkaas oo afartii bilba mar labixin doono.
Dowladda Itoobiya waxay uballan qaadday Agaasimayaasha warbaahinta in ay siin doonto siminaarro sare loogu qaadayo xirfadooda shaqo iyo qarash haddii ay kasoo dhalaalaan waxyaabaha lagu heshiiye ee ah in shacabka Soomaaliyeed laga siibo cadaawadda gaamurtay oo ay uqabaan xabashida Itoobiya.
Qaar kamid ah Idaacadaha gobolka Banaadir oo horay uheystay qandaraas qeyb ka ah duullaanka dalka lagusoo qaaday ayaa aad ugu riyaaqay tallaabadan balse waxaan la ogeyn sida idaacadaha iyo Telefeshinnada ku cusub heshiiskan ay u dhaqan gelin doonaan qandaraaskan ay Itoobiyaanka lasoo galeen.
Kulankii shalay waxaa wax ka ogaa agaasimayaasha wasaaradda warfaafinta Dowladda Federaalka kuwaas oo isugu yeerayay agaasimayaasha xarumaha warbaahinta, Itoobiya waxay xusul duub ugu jirtaa in shacabka Soomaaliyeed ay maskaxda ka gummeysato ka hor inta aan ladhaqan gelin heshiiskii Afrta dekadood ee Farmaajo uu Abiy Axmed lagalay sanaddii 2018.
Inta badan xarumaha warbaahinta ee kuyaal Muqdisho iyo gobollada kale ee dalka ayaa noqday kuwa ku hadla afka xukuumadda Farmaajo iyo soo duulayaasha AMISOM waxaana aad uyar in lahelo wariyaal madax banaan oo dhacdooyinka dalka si hufan usoo gudbin kara.
Tan iyo markii ay Farmaajo iyo Kheyre majaraha uqabteen DF-ka ayay warbaahintii dalka ka jirta ukala qeybiyeen kuwa laaluush ay ku kharqiyeen oo dacaayadooda ufaafiya iyo kuwa ay u hanjabeen oo aan baahin karin wararka aysan madaxda dowladdu Jeclaysan.
Duullaanka 12 sana jirsaday ee ciidamada Shisheeye kusoo qaadeen dalka Soomaaliya waxaa hareer socday duullaanno dhanka warbaahinta ah balse waxay warbaahintaas dhuuni raaca ah wajahday warbaahinta kale oo islaami ah taas oo umadda xaqiiqda usoo gudbisa walina dhabbahaas ku taagan.